Miyay Willian, N'Golo Kante & Rudiger Seegayaan Kulanka Berrito Chelsea Booqanayso Ee Man United? Tababare Lampard Ayaa Su'aashan Muhiimka Ah Ka Jawaabay. - Gool24.Net
Miyay Willian, N’Golo Kante & Rudiger Seegayaan Kulanka Berrito Chelsea Booqanayso Ee Man United? Tababare Lampard Ayaa Su’aashan Muhiimka Ah Ka Jawaabay.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay fursada xiddigaha kooxdiisa ee Willian Borges, N’Golo Kante & Antonio Rudiger ay dhammaantood u haystaan inay Man United kahor tagaan kulanka furitaanka ee Premier League.
Xiddigahan oo mudooyinkiii ugu dambeeyay dhaawac kaga maqnaa Blues ayaa dhammaantood tababarka qaatay galinkii dambe ee Jimcihii balse Lampard ayaa sheegay inuusan hubin haddii ay kulanka taam u yihiin.
Lampard ayaa sheegay in Kante, Willian iyo Rudiger ay dhammaantood taam yihiin isla markaana ay tababarkii la qaateen kooxda balse uu isagu go’aansan doono haddii uu kusoo bilaabayo kulanka Old Trafford oo deg deg ku noqon kara.
Frank ayaa yidhi “Kante waa taam, Miyuu taam u yahay kulanka? Waa wax ay tahay inaan si deg deg ah u go’aansado kulanka kahor”
“Waxa suurogal ah in Rudiger iyo William ay sidaas si lamid ah yihiin, Iyagu way tababaranayeen laakiin waxa laga yaabaa inat deg deg ku noqoto arrintaasi waa mid ay tahay inaan anigu qiyaaso ilaa Axada”.
Maqnaanshaha saddexdan xiddig ayaa dhibaato ku noqon karta tababare Lampard oo kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League waayihiisa tababarenimo ciyaari doona isla markaana uu waliba yahay kulan weyn.
Xaqiiqada ah in Blues iyo Red Devils ay kala hoggaaminayaan laba halyeey ayaa ah waxa dhadhanka weyn usii yeelaya kulanka Old Trafford lagu balansan yahay habeen dambe fiidka.